Xogta Sinnaanta lab iyo dheddig ee dunida - BBC News Somali
Xogta Sinnaanta lab iyo dheddig ee dunida
25 Oktoobar 2013
Muddo shan sano oo xiriir ah, dalka Iceland waxaa lagu qiimeeyay dalka adduunka ugu farqiga yar dhinaca sinnaanta dumarka iyo ragga ama lab iyo dheddig. Qiimaynta waxaa sameeyay Golaha Dhaqaalaha Adduunka (WEF).
Waxaa taas macnaheedu yahay in dalka dumarku ay ragga kala siman yihiin dhinaca helitaanka waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, waxaana aad suurtagal u ah in ay awoodaan in ay si buuxda uga qaybgalaan dumarku nolsha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka.
Waxaa liiska dhinaca sare ku soo biiraya dalalka Nordic-ga sida Finland, Norway iyo Sweden sida lagu xusay warbixinta adduunka ee qiimaynta lab iyo dheddig, 2013.
Guud ahaan farqiga lab iyo dheddig waa ciriiri in yar dunida oo dhan sanadkan 2013, iyadoo 86 ka mid ah 136 dal oo la darsay, oo u taagan 93% ee dadwaynaha dunida waxaa muuqday in soo hagaagid balse, isbadalku "isbadalku waa hubaal in uu gaabis yahay", waxaa yiri mid ka mid ah qorayaasha warbixintan, Saadia Zahidi.
Si aad wax uga ogaatid sida dalalka guud ahaan la isku barbardhigay iyo sidoo kale qaybaha muhiimka ah ee nolol maalmeedka, oo ay ku jiraan caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo siyaasadda, u fiirso qariiradahan:
Dalalka Waqooyiga Europe guud ahaan heer fiican ayay ku jiraan marka lala barbardhigo dalalka kale. WEF waxay taas u saarinaysaa, qayb ahaan, siyaasado dadka ku caawiya in ay simaan dalabaadka aan kala harin ee shaqada iyo nolosha qoyska.
Koonfurta Europe, farqiga u dhexeeya lab iyo dheddig ee dhinaca waxbarashada ayaa isbadal uu ku dhacay dhowr sano ka hor. balse, waxaa jira heer hoose oo ka qaybgalka dumarka ah ee dhinaca shaqada.
Dalka Philippines ayaa ka dhexmuuqda, iyadoo uu yahay dalka ugu sinnaanta badan dalalka Asia. Waxay tani qusaysaa soo xiridda farqiga dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada. dalka ayaa leh heer ka qaybgal oo aad u sareeya oo dhinaca dhaqaalaha ah, ayay sheegtay WEF.
Shiinaha wuxuu noqonayaa dalka 69-aad guud ahaan, wuxuu ka horeeyaan India oo ku jirtay 101-aad. India ayaa darajadeeda hoosaysaa waxaa sababay in ay natiijo hoose ka keentay dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha.
Bartamaha iyo Koonfurta America
Sadexda dal ee ugu xoogga badan waa Nicaragua, Cuba iyo Ecuador, oo dhamaantood ka mid ah 25 dal ee guud ahaan ugu sareeya. Booska ay Brazil ku jirto isma badalin, iyadoo sanadkii hore ahayd dalka 62-aad.
“Farqiga dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada ayaa la xiray dhowr sano ka hor. SIdaa darteed, waa qaarad diyaar u ah in ay horay u dhaqaaqdo dhinaca shaqada iyo ka qaybgalka siyaasadda," ayay tiri Saadia Zahidi.
Canada iyo Maraykanka waxay ku kala jiraan 20-aad iyo 23-aad siday u kala horeeyaan. Canada waxay horumar fiican ka samaysay waxbarashada, balse siyaasadda ayaysan guul wayn ka gaarin.
Maraykanku wuu ka hoos maray Canada dhinaca siyaasadda, balse wuxuu ka horeeyaa dalka deriskiisa ah dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada.
Africa-da ka hoosaysa Saxaraha
Qaar ka mid ah dalalka leh farqiga ugu wayn ee sinnaan la'aanta lab iyo dheddig ayaa halkan laga heli karaa; Chad iyo Ivory Coast waxay ku dhow yihiin salka ugu hooseeya darajaynta guud.
Balse Africada Koonfureed, waxaa ku jira dhowr dal oo ka qaybgalka dhinaca shaqada iyo siyaasadda uu aad u sareeyo, taasoo gacan ka gaysatay in ay ka mid noqdaan sodonka dal ee ugu sareeya. Lesotho waxay gashay kaalinta 16-aad, Koonfur Africa-na waxay hal darajo ka hoosaysaa Mozambique oo iyadu ku jirta kaalinta 26-aad.
Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Africa
Gobolkan waa midka ay ka jiraan qaar ka mid ah sinnaan la'aanta dhinaca lab iyo dheddig. Balse sawirka ayaa ah mid aan meel wada taagnayn. tusaale ahaa, dalalka gacanka waxay u muuqdaan in si xoog leh ay u maalgaliyeen dhinaca waxbarada hablaha, oo isbadal laga sameeyay dalka Imaaraadka Carabta. Dumar aad uga badan ragga ayaa ka baxaya jaamacaha dalkan.
Waxaa ay aad isaga hor imanayaa dalalka uu ka mid yahay Yemen, oo heerka waxbarashada dumarku uu aad u liito.
Sidee loo sameeyaa qiimaynta?
Si aad isku barbardhigto farqiyada dhinaca lab iyo dheddig ee dalal kala duwan, eeg tusmada uu sameeyay golaha WEF oo ka kooban dhowr iyo toban qaybood oo xog kala duwan ah. Natiijo hal ah (ama 100%) waxay u dhigantaa sinnaan; Eber (ama 0%) waxay u dhigantaa sinnaan-la'aan. Dalalka ayaa kadib lagu qiimeeyaa natiijada ay halkaas ka helaan.